“နေ့စဉ် ၁၅ မိနစ် မျှလောက်သော …အချိန်ပေး၍ သင်၏ ဆိုးနေသောကံကို ပြုပြင်နည်း” – ရွှေအလင်း
“နေ့စဉ် ၁၅ မိနစ် မျှလောက်သော …အချိန်ပေး၍ သင်၏ ဆိုးနေသောကံကို ပြုပြင်နည်း”
နေ့ စဉ် ၁၅ မိနစ် မျှလောက်သော အချိန်ပေး၍ သင်၏ ဆိုးနေတဲ့ကံကို ပြုပြင်နည်း
ကံ ကိုပြန်ကောင်း လာအောင် ပြုပြင်နည်း။ သေချင်လောက်အောင်ထိ ဆိုးနေတဲ့ကံကို ကုသိုလ်၅-မျိုးနဲ့ ပြုပြင် ယူလို့ရပါတယ်။သေချင်လောက်အောင် ဆိုးနေတဲ့ကံကို ကုသိုလ် ၅မျိုးနဲ့ နေ့စဉ်ပြုပြင် ပစ်လိုက်စမ်းပါ။ ဆိုးနေတဲ့ကံ ” နင်နေ ငါသွား ” ဖြစ်သွား ပါလိမ့်မယ်။အဲဒီကုသိုလ် ၅မျိုးကတော့…နေ့စဉ် ၁၅ မိနစ် မျှလောက်သော အချိန်ပေး၍ သင်၏ ဆိုးနေတဲ့ကံကို ပြုပြင်နည်း
၁။ ဒါန ၂။ သီလ ၃။ ဘာဝနာ (ဂုဏ်တော်ပွား) ၄။ မေတ္တာ ၅။ ၀ိပဿနာ တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီ ကုသိုလ် ၅မျိုးကို နေ့စဉ် ဖြစ်စေရမယ်လို့ အဓိဋ္ဌာန်ပြီး နေ့စဉ် ပြုလုပ် သွားဖို့ပါပဲ။ ငါးမျိုးကုသိုလ် ဘယ်လိုပြုရမယ်။
၁။ ဒါန ပထမဆုံးကုသိုလ်က ဒါန ပါ။ ဒါနဆိုတဲ့နေရာမှာ ရှင်၁သောင်းပြုပေးနိုင်မှ။ ကျောင်းကြီးတွေ ဆောက်လုပ်လှူဒါန်းနိုင်မှ ဒါန မဟုတ်ပါဘူး။ အိမ်မှာရှိတဲ့ ဘုရားကို ရေချမ်း ကပ်လိုက်မယ် ဆိုလည်း ဒါန ဖြစ်သွားတာပါပဲ။နောက် ကိုယ်ထမင်းချက်မယ့် ဆန်ထဲက လက်တစ်ဆုတ်စာလောက်နှိုက်ပြီး အိမ်ရှေ့က စာကလေးတွေ ခိုကလေးတွေကို ပစ်ကျွေးလိုက်မယ်ဆိုရင်လည်း ဒါနဖြစ်သွားတာပါပဲ။ဆန်လက်တစ်ဆုတ် လောက်နဲ့တော့ မိသားစု ထမင်းဝိုင်းကို သိပ်ပြီးလည်း မထိခိုက်စေပါဘူး။
နေ့စဉ် လက်တစ်ဆုတ် စာလောက် စာကလေးတွေကို ကျွေးနေမယ် ဆိုရင်လည်း ကိုယ့်ဝန် ကိုယ့်အားနဲ့ မျှတဲ့ ဒါန ဖြစ်နေတာပါ။
၂။ သီလ ဒုတိယက သီလ ပါ။ သီလမှာလည်း လောကီ ထဲမှာနေတဲ့ လူတစ်ယောက် အတွက် ငါးပါးသီလလောက် လုံခြုံအောင် စောင့်ထိန်း လိုက်နိုင်တယ် ဆိုရင်ပဲ တော်တော် လုံလောက်နေပါပြီ။တစ်ဆင့်တက်ပြီး ဥပုသ်နေ့တွေမှာ ၈ပါးသီလ၊ ၉ပါးသီလကို စောင့်ထိန်း နိုင်ရင်တော့ အကောင်းဆုံးပေါ့။သီလကို စောင့်ရှောက်တဲ့အတွက် သီလကလည်း ကိုယ့်ကို သူ့သတ္တိ အားလျော်စွာ ပြန်စောင့်ရှောက် ပါလိမ့်မယ်။
၃။ ဘာဝနာ (ဂုဏ်တော်ပွား) တတိယက ဂုဏ်တော်ပါ။ ဂုဏ်တော် ၉-ပါးထဲက ကိုယ်နှစ်သက်ရာ တစ်ခုခုကို ပွားလို့ရပါတယ်။အရဟံဂုဏ်တော်ကိုပဲ …
အရဟံ = ပူဇော်အထူးကို ခံယူထိုက်သော မြတ်စွာဘုရား၊အရဟံ = ကိလေသာ ကင်းစင်တော်မူသော မြတ်စွာဘုရား၊အရဟံ = ဆိတ်ကွယ်ရာအရပ်၌ပင် မကောင်းမှုကို ပြုတော်မမူသော မြတ်စွာဘုရား၊ လို့ ပွားများရပါတယ်။
အရဟံ ဆိုတဲ့ ပါဠိလေးရယ်။ အရဟံရဲ့ နောက်က အနက်သုံးမျိုးရယ်က ပွားလို့ ဆင်ခြင်လို့ သိပ်ကောင်းတဲ့ ပါဠိနဲ့အနက်လေးတွေပါ။ ဂုဏ်တော်ပွားတဲ့အတွက် ဂုဏ်တော်က သူ့သတ္တိအားလျော်စွာ ပြန်စောင့်ရှောက်နေ ပါလိမ့်မယ်။
၄။ မေတ္တာ စတုတ္ထက မေတ္တာပါ။ မေတ္တာပွားတဲ့နေရာမှာ ပွားနည်းတွေကတော့ သီသန့်အကျယ်ကို ရှိပါတယ်။ စာရေးသူရဲ့ မေတ္တာ အတွေးများ စာအုပ်မှာလည်း ပွားပုံ ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ရေးပြထားပါတယ်။မေတ္တာပွားတဲ့ နေရာမှာ အဓိက အကြံပေးချင် တာတော့ ပထမ ကိုယ့်အပေါ် ကျေးဇူးရှိတဲ့ ကျေးဇူးများတဲ့ လူပုဂ္ဂိုလ်အားလုံးကို တစ်ယောက်ချင်း ကုန်အောင်ပွားပါ။ပြီးရင် နတ်ကောင်း နတ်မြတ်တွေ၊ ကိုယ်စောင့်နတ်-အိမ်စောင့်နတ် ကစပြီး၊ လမ်းမြို့နယ်၊ မြို့၊ နိုင်ငံကို စောင့်ရှောက်နေကြသောနတ်ကောင်း နတ်မြတ်တွေ အားလုံး ကိုယ်ဆင်းရဲ စိတ်ဆင်းရဲ ကင်းပါစေ၊ အစစအရာရာ အဆင်ပြေ ပါစေ… စသည်ဖြင့် ပေါ့လေ။
၅။ ၀ိပဿနာ နောက်ဆုံးက ၀ိပဿနာပါ။ ၀ိပဿနာ ကတော့ ကိုယ်အားထုတ်ဖူးရာ-ကိုယ်သန်ရာ သန်ရာ ကိုယ့် အာစရိယ ၀ါဒအတိုင်း မှတ်ယူလို့ ရပါတယ်။
(မည်သည့် တရားစခန်း မည်သည့် အာစရိယ၀ါဒမျှ သင်ကြားထားခြင်း မရှိသူများအဖို့ အစပိုင်းတွင် တင်ပလ္လင်ခွေ(ထက်ဝယ်ဖွဲ့ခွေ)ထိုင်၊ ဘယ်လက်ပေါ် ညာလက်ထပ်တင်၊ ခါး-လည်ပင်း-ဦးခေါင်းကို မတ်မတ်ထား၊
အသက်ကို ပုံမှန်ရှူလျှက် ၀င်လေ၀င်လာလျှင် ၀င် လာ သည်ဟု သိပေး၊ ထွက်လေ ထွက်သွားရင် ထွက်သွားသည်ဟု သိပေးခြင်းဖြင့် မိမိစိတ်ကို ထိုထိုနှာသီးဝသို့သာ စူးစိုက်ရောက်ရှိစေရန် ပဏာမ လေ့ကျင့်ကြလျှက် ၇ရက်စခန်း-၁၀ရက်စခန်း စသည်တို့ကို ၀င်ရောက်နိုင်ရန် တိုး၍ ကြိုးစား ကြသင့်ပေသည်။ )
ကုသိုလ်-၅မျိုး တစ်နေ့တာ နေ့စဉ် ၁၅ မိနစ် မျှလောက်သော အချိန်ပေး၍ သင်၏ ဆိုးနေတဲ့ကံကို ပြုပြင်နည်း ၁ ကဲ … စာဖတ်သူ၊ စိတ်ကူးနဲ့ပဲ ကုသိုလ်၅မျိုးကို စမ်းကြည့်ရအောင်ပါ။
၁။ အိပ်ရာထ မနက် အိပ်ရာက ထတာနဲ့ ကိုယ်လက် သန့်စင်ပြီး မိသားစု ကိစ္စတွေကို ဘာမှ မလုပ်နဲ့ဦး။ ဘုရားခန်းကို အရင်သွားပါ။ ဘုရားသောက်တော်ရေကိုအရင်ကပ်ပါ။ (ဒါန) ကပ်ပြီးရင် ၅ပါးသီလ ခံယူပါ။ (သီလ) အဲဒါပြီးရင် ဂုဏ်တော်ကို ၅-မိနစ် ( ဂုဏ်တော် ) မေတ္တာကို ၅-မိနစ် ပွားပါ။ ( မေတ္တာ ) ပြီးရင် ၀ိပဿနာ ၅-မိနစ် ပွားများပါ။ ( ၀ိပဿနာ )
အင်မတန် နည်းပါးတဲ့ ၁၅မိနစ် အချိန်လောက်တော့ လူတိုင်း လုပ်နိုင်လောက်မယ် ထင်ပါတယ်။ ( ၅မိနစ်စီ ဆိုသည်မှာ အနည်းဆုံး ပြုရန်အချိန်ကို ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပြီး မိမိတို့၏ ခွန်အားအလိုက် သဒ္ဓါ တရားအလိုက် ၁၀မိနစ်စီ၊ နာရီဝက်စီ၊ တစ်နာရီစီ စသည်ဖြင့် အဓိဋ္ဌာန်ပြုနေ့တစ်နေ့တာရဲ့ အစကို ကုသိုလ် ၅မျိုးနဲ့ စလိုက်တာ ဘယ်လောက် ကျက်သရေ ရှိသွားလဲ ။ အိပ်ရာထပြီး နာရီဝက် ၁နာရီအတွင်းမှာပဲ ကုသိုလ်၅မျိုး ရနေပါပြီ။အဲဒီ ကုသိုလ် ၅မျိုးပြုပြီးမှ မိသားစုကိစ္စ၊ ကိုယ့်ကိစ္စ ဝေယျာဝစ္စတွေကို ပြုလုပ်ပါ။
၂။ နေ့လည် အဲဒီလိုနဲ့ မနက်စာ စားပြီးတဲ့ အခါ ဆန် လက်တစ်ဆုတ် စာယူပြီး ခြံရှေ့မှာ ငှက်ကလေးတွေ အတွက် ပက်ကျွေးလိုက်ပါဦး။ကျွေးပြီးသွားရင် အဆစ်အနေနဲ့ ” ဒီနေ့ မနက် ပြုဖြစ်ခဲ့တဲ့ ကုသိုလ်၅မျိုး ကိုလည်း အမျှ ပေးဝေပါတယ်။ အမျှ အမျှ အမျှ ယူတော်မူကြပါ။သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု ” ဆိုပြီး နတ်ကောင်း နတ်မြတ်များနဲ့တကွ ဝေနေယျ အပေါင်းကို အမျှပေးဝေလိုက်ပါဦး။
၃။ ညပိုင်း တတ်နိုင်တယ်။ အချိန်ရတယ်။ သဒ္ဓါတရားလဲ ထက်သန်လာတယ် ဆိုရင် ညပိုင်း ကိုးရီးယားကားလေး မလာခင်၊ ဒါမှမဟုတ် ကိုးရီးယားကားလေး ပြီးသွားတဲ့အခါ ကုသိုလ်ငါးမျိုးကို မနက်ကအတိုင်း တစ်ကြိမ် ထပ်လုပ်လိုက်ပါဦး။
နေ့စဉ်ပြုအပ်သည်ဒီအတိုင်းသာ နေ့စဉ်ပြုသွားစမ်းပါ။ ဆိုးနေတဲ့ကံဟာ တောင်းပန်ပြီး ထွက်သွားဦးမှာပါ။ဒါပေမယ့် ဒီနေ့လုပ်- နက်ဖြန်ဖြစ် ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ ဘယ်ဖြစ်နိုင်မှာလဲ။ တစ်လတန်သည် တစ်နှစ်တန်သည်တော့ စွဲလုပ်ရပါမယ်။ ရက်မပျက်အောင် အဓိဋ္ဌာန်ပြု၍ လုပ်ရပါမယ်။အကုသိုလ်ဆိုတဲ့ အင်းအားက ကြီးလွန်းနေရင်တော့ ချက်ခြင်းကြီး ရနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် ကုသိုလ် အင်အား ကောင်းလာတာနဲ့ အမျှ ကုသိုလ်အင်အားကို ကြည့်ပြီး လန့်ပြေးသွားမှာပါ။ဒါက ကံဆိုး နေတဲ့သူတွေကို ပြောတာပါ။ကံကောင်း နေတဲ့သူတွေ အတွက်လည်း အမြဲတမ်း ကံကောင်းနေအောင် ကုသိုလ်၅မျိုး နဲ့ အမြဲပြုစု စောင့်ရှောက်နေသင့်ပါတယ်။ဒီကုသိုလ်၅မျိုးနဲ့ ကံကောင်းအောင် လုပ်နေတဲ့အတွက် ဒုတိယဘ၀၊ တတိယဘ၀ စသည်တွေမှာလည်း ဆက်ပြီး ကံကောင်းနေဦးမှာပါ။
ဒုက္ခကြုံရင် သစ္စာဆို။ဒီကုသိုလ် ၅မျိုးကို ကံကောင်းခြင်း၊ ကံဆိုးခြင်းကြောင့် မဟုတ်ဘဲ နေ့စဉ်ဝတ်တစ်ခု အနေနဲ့ ပြုရပါမယ်။ အဲဒီလို ပြုနေစဉ် အတွင်းမှာပဲဘ၀ အခက်အခဲ တစ်ခု ကြုံလာမယ်၊ ဒါဆို ကိုယ်ပြုတဲ့ကုသိုလ်၅မျိုးကို နေ့စဉ် အမျှပေးဝေနေတဲ့ နတ်ကောင်းန တ်မြတ်တွေကို တိုင်တည်ပြီး သစ္စာ ဆိုလို့လည်း ရပါတယ်။” ကျွန်ှုပ်သည် ကုသိုလ်၅မျိုးကို နေ့စဉ်ပြုပြီး၊ နတ်ကောင်းန တ်မြတ် များကိုလည်း နေ့စဉ် အမျှပေးဝေခဲ့ပါတယ်။ ဤသစ္စာစကား မှန်ကန်ပါက ယခုတွေ့ကြုံနေရသော အခက်အခဲများ ပြေပျောက် ပါစေသတည်း။ နတ်ကောင်း နတ်မြတ်တို့က ကူညီမစတော်မူပါ ” စသည်ဖြင့်ပေါ့လေ…..
သံသရာကပင် ကျွတ်နိုင်ရဲ့ကုသိုလ် ၅-မျိုးထဲမှာ ၀ိပဿနာလည်း ပါနေတော့ တရားမှတ်ရင် ပါရမီပါခဲ့ရင် တစ်မဂ် တစ်ဖိုလ်မှသည် လေးမဂ်၊ လေးဖိုလ် အထိ တရားထူး တရားမြတ်တွေ ရသွားပြီး သံသရာဝဋ်က ကျွတ်သွားနိုင်ပါသေးတယ်။ကုသိုလ် ၅မျိုးကို ဘယ်အဆင့်အထိ ပြုရမလဲ … ဆိုရင် ညအိပ်ရာဝင်လို့မှ ဒီနေ့ တစ်နေ့တာအတွက် ကုသိုလ် ၅မျိုး မပြုရသေးရင် အိပ်လို့ လုံးဝမပျော်တဲ့ အဆင့် ချက်ခြင်း ထလုပ်လိုက်မှ အိပ်ပျော်တယ် အိပ်လို့ရတယ် ဆိုတဲ့ အဆင့်ထိ ပြုလုပ်ကြရပါတယ် …ကဲ …. စာဖတ်သူ … ၊ ကံ နဲ့ ပတ်သက်လို့ သေချင်လောက်အောင် ဆိုးနေပါစေ။ ကုသိုလ် ၅မျိုးနဲ့သာ နေ့စဉ် ပြုပြင် လိုက်စမ်းပါ။ မကြာခင် ကံကောင်းလာပါလိမ့်မယ်။
နေ့ စဉျ ၁၅ မိနဈ မြှလောကျသော အခြိနျပေး၍ သငျ၏ ဆိုးနတေဲ့ကံကို ပွုပွငျနညျး
ကံ ကိုပွနျကောငျး လာအောငျ ပွုပွငျနညျး။ သခေငျြလောကျအောငျထိ ဆိုးနတေဲ့ကံကို ကုသိုလျ၅-မြိုးနဲ့ ပွုပွငျ ယူလို့ရပါတယျ။သခေငျြလောကျအောငျ ဆိုးနတေဲ့ကံကို ကုသိုလျ ၅မြိုးနဲ့ နစေ့ဉျပွုပွငျ ပဈလိုကျစမျးပါ။ ဆိုးနတေဲ့ကံ ” နငျနေ ငါသှား ” ဖွဈသှား ပါလိမျ့မယျ။အဲဒီကုသိုလျ ၅မြိုးကတော့…နစေ့ဉျ ၁၅ မိနဈ မြှလောကျသော အခြိနျပေး၍ သငျ၏ ဆိုးနတေဲ့ကံကို ပွုပွငျနညျး
၁။ ဒါန ၂။ သီလ ၃။ ဘာဝနာ (ဂုဏျတျောပှား) ၄။ မတ်ေတာ ၅။ ဝိပဿနာ တို့ ဖွဈပါတယျ။
အဲဒီ ကုသိုလျ ၅မြိုးကို နစေ့ဉျ ဖွဈစရေမယျလို့ အဓိဋ်ဌာနျပွီး နစေ့ဉျ ပွုလုပျ သှားဖို့ပါပဲ။ ငါးမြိုးကုသိုလျ ဘယျလိုပွုရမယျ။
၁။ ဒါန ပထမဆုံးကုသိုလျက ဒါန ပါ။ ဒါနဆိုတဲ့နရောမှာ ရှငျ၁သောငျးပွုပေးနိုငျမှ။ ကြောငျးကွီးတှေ ဆောကျလုပျလှူဒါနျးနိုငျမှ ဒါန မဟုတျပါဘူး။ အိမျမှာရှိတဲ့ ဘုရားကို ရခေမျြး ကပျလိုကျမယျ ဆိုလညျး ဒါန ဖွဈသှားတာပါပဲ။နောကျ ကိုယျထမငျးခကျြမယျ့ ဆနျထဲက လကျတဈဆုတျစာလောကျနှိုကျပွီး အိမျရှကေ့ စာကလေးတှေ ခိုကလေးတှကေို ပဈကြှေးလိုကျမယျဆိုရငျလညျး ဒါနဖွဈသှားတာပါပဲ။ဆနျလကျတဈဆုတျ လောကျနဲ့တော့ မိသားစု ထမငျးဝိုငျးကို သိပျပွီးလညျး မထိခိုကျစပေါဘူး။
နစေ့ဉျ လကျတဈဆုတျ စာလောကျ စာကလေးတှကေို ကြှေးနမေယျ ဆိုရငျလညျး ကိုယျ့ဝနျ ကိုယျ့အားနဲ့ မြှတဲ့ ဒါန ဖွဈနတောပါ။
၂။ သီလ ဒုတိယက သီလ ပါ။ သီလမှာလညျး လောကီ ထဲမှာနတေဲ့ လူတဈယောကျ အတှကျ ငါးပါးသီလလောကျ လုံခွုံအောငျ စောငျ့ထိနျး လိုကျနိုငျတယျ ဆိုရငျပဲ တျောတျော လုံလောကျနပေါပွီ။တဈဆငျ့တကျပွီး ဥပုသျနတှေ့မှော ၈ပါးသီလ၊ ၉ပါးသီလကို စောငျ့ထိနျး နိုငျရငျတော့ အကောငျးဆုံးပေါ့။သီလကို စောငျ့ရှောကျတဲ့အတှကျ သီလကလညျး ကိုယျ့ကို သူ့သတ်တိ အားလြျောစှာ ပွနျစောငျ့ရှောကျ ပါလိမျ့မယျ။
၃။ ဘာဝနာ (ဂုဏျတျောပှား) တတိယက ဂုဏျတျောပါ။ ဂုဏျတျော ၉-ပါးထဲက ကိုယျနှဈသကျရာ တဈခုခုကို ပှားလို့ရပါတယျ။အရဟံဂုဏျတျောကိုပဲ …
အရဟံ = ပူဇျောအထူးကို ခံယူထိုကျသော မွတျစှာဘုရား၊အရဟံ = ကိလသော ကငျးစငျတျောမူသော မွတျစှာဘုရား၊အရဟံ = ဆိတျကှယျရာအရပျ၌ပငျ မကောငျးမှုကို ပွုတျောမမူသော မွတျစှာဘုရား၊ လို့ ပှားမြားရပါတယျ။
အရဟံ ဆိုတဲ့ ပါဠိလေးရယျ။ အရဟံရဲ့ နောကျက အနကျသုံးမြိုးရယျက ပှားလို့ ဆငျခွငျလို့ သိပျကောငျးတဲ့ ပါဠိနဲ့အနကျလေးတှပေါ။ ဂုဏျတျောပှားတဲ့အတှကျ ဂုဏျတျောက သူ့သတ်တိအားလြျောစှာ ပွနျစောငျ့ရှောကျနေ ပါလိမျ့မယျ။
၄။ မတ်ေတာ စတုတ်ထက မတ်ေတာပါ။ မတ်ေတာပှားတဲ့နရောမှာ ပှားနညျးတှကေတော့ သီသနျ့အကယျြကို ရှိပါတယျ။ စာရေးသူရဲ့ မတ်ေတာ အတှေးမြား စာအုပျမှာလညျး ပှားပုံ ပွညျ့ပွညျ့စုံစုံ ရေးပွထားပါတယျ။မတ်ေတာပှားတဲ့ နရောမှာ အဓိက အကွံပေးခငျြ တာတော့ ပထမ ကိုယျ့အပျေါ ကြေးဇူးရှိတဲ့ ကြေးဇူးမြားတဲ့ လူပုဂ်ဂိုလျအားလုံးကို တဈယောကျခငျြး ကုနျအောငျပှားပါ။ပွီးရငျ နတျကောငျး နတျမွတျတှေ၊ ကိုယျစောငျ့နတျ-အိမျစောငျ့နတျ ကစပွီး၊ လမျးမွို့နယျ၊ မွို့၊ နိုငျငံကို စောငျ့ရှောကျနကွေသောနတျကောငျး နတျမွတျတှေ အားလုံး ကိုယျဆငျးရဲ စိတျဆငျးရဲ ကငျးပါစေ၊ အစစအရာရာ အဆငျပွေ ပါစေ… စသညျဖွငျ့ ပေါ့လေ။
၅။ ဝိပဿနာ နောကျဆုံးက ဝိပဿနာပါ။ ဝိပဿနာ ကတော့ ကိုယျအားထုတျဖူးရာ-ကိုယျသနျရာ သနျရာ ကိုယျ့ အာစရိယ ဝါဒအတိုငျး မှတျယူလို့ ရပါတယျ။
(မညျသညျ့ တရားစခနျး မညျသညျ့ အာစရိယဝါဒမြှ သငျကွားထားခွငျး မရှိသူမြားအဖို့ အစပိုငျးတှငျ တငျပလ်လငျခှေ(ထကျဝယျဖှဲ့ခှေ)ထိုငျ၊ ဘယျလကျပျေါ ညာလကျထပျတငျ၊ ခါး-လညျပငျး-ဦးခေါငျးကို မတျမတျထား၊
အသကျကို ပုံမှနျရှူလြှကျ ဝငျလဝေငျလာလြှငျ ဝငျ လာ သညျဟု သိပေး၊ ထှကျလေ ထှကျသှားရငျ ထှကျသှားသညျဟု သိပေးခွငျးဖွငျ့ မိမိစိတျကို ထိုထိုနှာသီးဝသို့သာ စူးစိုကျရောကျရှိစရေနျ ပဏာမ လကေ့ငျြ့ကွလြှကျ ၇ရကျစခနျး-၁၀ရကျစခနျး စသညျတို့ကို ဝငျရောကျနိုငျရနျ တိုး၍ ကွိုးစား ကွသငျ့ပသေညျ။ )
ကုသိုလျ-၅မြိုး တဈနတေ့ာ နစေ့ဉျ ၁၅ မိနဈ မြှလောကျသော အခြိနျပေး၍ သငျ၏ ဆိုးနတေဲ့ကံကို ပွုပွငျနညျး ၁ ကဲ … စာဖတျသူ၊ စိတျကူးနဲ့ပဲ ကုသိုလျ၅မြိုးကို စမျးကွညျ့ရအောငျပါ။
၁။ အိပျရာထ မနကျ အိပျရာက ထတာနဲ့ ကိုယျလကျ သနျ့စငျပွီး မိသားစု ကိစ်စတှကေို ဘာမှ မလုပျနဲ့ဦး။ ဘုရားခနျးကို အရငျသှားပါ။ ဘုရားသောကျတျောရကေိုအရငျကပျပါ။ (ဒါန) ကပျပွီးရငျ ၅ပါးသီလ ခံယူပါ။ (သီလ) အဲဒါပွီးရငျ ဂုဏျတျောကို ၅-မိနဈ ( ဂုဏျတျော ) မတ်ေတာကို ၅-မိနဈ ပှားပါ။ ( မတ်ေတာ ) ပွီးရငျ ဝိပဿနာ ၅-မိနဈ ပှားမြားပါ။ ( ဝိပဿနာ )
အငျမတနျ နညျးပါးတဲ့ ၁၅မိနဈ အခြိနျလောကျတော့ လူတိုငျး လုပျနိုငျလောကျမယျ ထငျပါတယျ။ ( ၅မိနဈစီ ဆိုသညျမှာ အနညျးဆုံး ပွုရနျအခြိနျကို ဆိုလိုခွငျးဖွဈပွီး မိမိတို့၏ ခှနျအားအလိုကျ သဒ်ဓါ တရားအလိုကျ ၁၀မိနဈစီ၊ နာရီဝကျစီ၊ တဈနာရီစီ စသညျဖွငျ့ အဓိဋ်ဌာနျပွုနတေ့ဈနတေ့ာရဲ့ အစကို ကုသိုလျ ၅မြိုးနဲ့ စလိုကျတာ ဘယျလောကျ ကကျြသရေ ရှိသှားလဲ ။ အိပျရာထပွီး နာရီဝကျ ၁နာရီအတှငျးမှာပဲ ကုသိုလျ၅မြိုး ရနပေါပွီ။အဲဒီ ကုသိုလျ ၅မြိုးပွုပွီးမှ မိသားစုကိစ်စ၊ ကိုယျ့ကိစ်စ ဝယြောဝစ်စတှကေို ပွုလုပျပါ။
၂။ နလေ့ညျ အဲဒီလိုနဲ့ မနကျစာ စားပွီးတဲ့ အခါ ဆနျ လကျတဈဆုတျ စာယူပွီး ခွံရှမှေ့ာ ငှကျကလေးတှေ အတှကျ ပကျကြှေးလိုကျပါဦး။ကြှေးပွီးသှားရငျ အဆဈအနနေဲ့ ” ဒီနေ့ မနကျ ပွုဖွဈခဲ့တဲ့ ကုသိုလျ၅မြိုး ကိုလညျး အမြှ ပေးဝပေါတယျ။ အမြှ အမြှ အမြှ ယူတျောမူကွပါ။သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု ” ဆိုပွီး နတျကောငျး နတျမွတျမြားနဲ့တကှ ဝနေယြေ အပေါငျးကို အမြှပေးဝလေိုကျပါဦး။
၃။ ညပိုငျး တတျနိုငျတယျ။ အခြိနျရတယျ။ သဒ်ဓါတရားလဲ ထကျသနျလာတယျ ဆိုရငျ ညပိုငျး ကိုးရီးယားကားလေး မလာခငျ၊ ဒါမှမဟုတျ ကိုးရီးယားကားလေး ပွီးသှားတဲ့အခါ ကုသိုလျငါးမြိုးကို မနကျကအတိုငျး တဈကွိမျ ထပျလုပျလိုကျပါဦး။
နစေ့ဉျပွုအပျသညျဒီအတိုငျးသာ နစေ့ဉျပွုသှားစမျးပါ။ ဆိုးနတေဲ့ကံဟာ တောငျးပနျပွီး ထှကျသှားဦးမှာပါ။ဒါပမေယျ့ ဒီနလေု့ပျ- နကျဖွနျဖွဈ ဆိုတဲ့ပုံစံမြိုးတော့ ဘယျဖွဈနိုငျမှာလဲ။ တဈလတနျသညျ တဈနှဈတနျသညျတော့ စှဲလုပျရပါမယျ။ ရကျမပကျြအောငျ အဓိဋ်ဌာနျပွု၍ လုပျရပါမယျ။အကုသိုလျဆိုတဲ့ အငျးအားက ကွီးလှနျးနရေငျတော့ ခကျြခွငျးကွီး ရနိုငျမှာ မဟုတျပါဘူး။ဒါပမေယျ့ ကုသိုလျ အငျအား ကောငျးလာတာနဲ့ အမြှ ကုသိုလျအငျအားကို ကွညျ့ပွီး လနျ့ပွေးသှားမှာပါ။ဒါက ကံဆိုး နတေဲ့သူတှကေို ပွောတာပါ။ကံကောငျး နတေဲ့သူတှေ အတှကျလညျး အမွဲတမျး ကံကောငျးနအေောငျ ကုသိုလျ၅မြိုး နဲ့ အမွဲပွုစု စောငျ့ရှောကျနသေငျ့ပါတယျ။ဒီကုသိုလျ၅မြိုးနဲ့ ကံကောငျးအောငျ လုပျနတေဲ့အတှကျ ဒုတိယဘဝ၊ တတိယဘ၀ စသညျတှမှောလညျး ဆကျပွီး ကံကောငျးနဦေးမှာပါ။
ဒုက်ခကွုံရငျ သစ်စာဆို။ဒီကုသိုလျ ၅မြိုးကို ကံကောငျးခွငျး၊ ကံဆိုးခွငျးကွောငျ့ မဟုတျဘဲ နစေ့ဉျဝတျတဈခု အနနေဲ့ ပွုရပါမယျ။ အဲဒီလို ပွုနစေဉျ အတှငျးမှာပဲဘ၀ အခကျအခဲ တဈခု ကွုံလာမယျ၊ ဒါဆို ကိုယျပွုတဲ့ကုသိုလျ၅မြိုးကို နစေ့ဉျ အမြှပေးဝနေတေဲ့ နတျကောငျးန တျမွတျတှကေို တိုငျတညျပွီး သစ်စာ ဆိုလို့လညျး ရပါတယျ။” ကြှနျှုပျသညျ ကုသိုလျ၅မြိုးကို နစေ့ဉျပွုပွီး၊ နတျကောငျးန တျမွတျ မြားကိုလညျး နစေ့ဉျ အမြှပေးဝခေဲ့ပါတယျ။ ဤသစ်စာစကား မှနျကနျပါက ယခုတှကွေုံ့နရေသော အခကျအခဲမြား ပွပြေောကျ ပါစသေတညျး။ နတျကောငျး နတျမွတျတို့က ကူညီမစတျောမူပါ ” စသညျဖွငျ့ပေါ့လေ…..
သံသရာကပငျ ကြှတျနိုငျရဲ့ကုသိုလျ ၅-မြိုးထဲမှာ ဝိပဿနာလညျး ပါနတေော့ တရားမှတျရငျ ပါရမီပါခဲ့ရငျ တဈမဂျ တဈဖိုလျမှသညျ လေးမဂျ၊ လေးဖိုလျ အထိ တရားထူး တရားမွတျတှေ ရသှားပွီး သံသရာဝဋျက ကြှတျသှားနိုငျပါသေးတယျ။ကုသိုလျ ၅မြိုးကို ဘယျအဆငျ့အထိ ပွုရမလဲ … ဆိုရငျ ညအိပျရာဝငျလို့မှ ဒီနေ့ တဈနတေ့ာအတှကျ ကုသိုလျ ၅မြိုး မပွုရသေးရငျ အိပျလို့ လုံးဝမပြျောတဲ့ အဆငျ့ ခကျြခွငျး ထလုပျလိုကျမှ အိပျပြျောတယျ အိပျလို့ရတယျ ဆိုတဲ့ အဆငျ့ထိ ပွုလုပျကွရပါတယျ …ကဲ …. စာဖတျသူ … ၊ ကံ နဲ့ ပတျသကျလို့ သခေငျြလောကျအောငျ ဆိုးနပေါစေ။ ကုသိုလျ ၅မြိုးနဲ့သာ နစေ့ဉျ ပွုပွငျ လိုကျစမျးပါ။ မကွာခငျ ကံကောငျးလာပါလိမျ့မယျ။
ကျွန်တော် ထီ…မရောင်းတော့ပါ နိုင်ငံတော်ကို ထီ ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ ရောမလိမ်ချင်လို့ပါ
​ပျောက်​ဆုံး​နေတဲ့ ကျွန်​​တော့်​​ဆွေမျိုးသမီးငယ်​ ကုစားလို့မရတဲ့ ဆုံးရှုံးမှုနှင့်​အတူ ရင်နာစွာနဲ့ ပြန်​​တွေ့ပြီ
ရပ်ကွက်ထဲမှာ အမေနဲ့အတူ အမှိုက်ကောက်ရတဲ့ အဖေမဲ့ ဘဝကနေ Miss ဖြစ်လာခဲ့သော ဘဝမမေ့တဲ့ အမေ့ချစ်သည်း အလှမယ်လေး
၂၀၁၈ ခုနှစ် အကယ်ဒမီဆုချီးမြင့်ပွဲ အမျိုးသား/အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင်၊ဇာတ်ပို့ ဆုအတွက် စကာတင် စာရင်းဝင်သူများ
ရှိသမျှအိမ်မြေတို့ကိုရောင်းပြီး ထန်းလက်တဲထိုးနေ၍ သိန်းကိုးရာငါးဆယ်ကျော်...
ရှရွတ်ခန်းတောင် ဆွံ့အသွားလောက်မယ့် ကျော်ကျော်ဗိုလ် သီဆိုထားတဲ့ အလန်းစား...
ဗိုလ်​ချုပ်​ ဇာတ်​လမ်းတို HD Version မျက်ရည်ကျမိတယ် … လေးစားပါတယ်
ပန်းနာ ရင်ကျပ် …ရောဂါရှိသူများအတွက်...